Quruxda Caadiga ah
10 shaamboo oo 2-in-1 ugu fiican iyo qaboojiyeyaal
[ad_1] Ma waxaad ka mid tahay kuwa had iyo jeer baxsadka ah? Miyaad neceb tahay inaad sugto in qaboojiyaha la nuugo ka dib markaad timaha dhaqdo? Hadday sidaas tahay, nasiib wanaag adiga, waxaa jira alaabo timo daryeel oo timaha ka baxsan oo nadiifiya isla markaana hagaajiya timahaaga waqti isku mid ah. Adigu… Continue reading 10 shaamboo oo 2-in-1 ugu fiican iyo qaboojiyeyaal
Kala sooc sida Beauty
10 xiddigood oo qurux badan oo soo noqday dabacsanaan kadib
[ad_1] NSW muxuu Alison Porter uga waayay shaashadaha ka dib guushii Curly Sue, maxay samaysay Svetlana Loboda markii ay ka tagtay kooxda VIA GRA, sideese Andie MacDowell u maareeysay inay “dib uga soo kabato” jilaa ilaa moodel? 10 xiddigood oo qurux badan oo ku soo noqday caan ka dib nasiino. Svetlana Loboda “Dhammaan dadka… Continue reading 10 xiddigood oo qurux badan oo soo noqday dabacsanaan kadib
5 serum wajiga ayaan mar kale iibsan doonaa
(ad_1] Daawooyinkaagu waa serum wajiga, wax kasta oo kale ayaa raaci doona. Dhammaan… Continue reading 5 serum wajiga ayaan mar kale iibsan doonaa
sidee buu u eg yahay hooyooyinkeenii hadda?
[ad_1] Calaamadda BAchromin waa taqaan qof kasta oo waligiis xiisaynayey dhibaatada iftiinka maqaarka. Oo haddii aadan si lama filaan ah u maqlin isaga, weydii hooyadaa - iyadu waa og tahay hubaal. Kareemka kaliya ee loogu talagalay dhibcaha da'da Achromin, oo ay isticmaaleen haweenka ku jira USSR, waxaa soo saaray Bulgaariya… Continue reading sidee buu u eg yahay hooyooyinkeenii hadda?
35 cayaartooyda ugu quruxda badan dumarka waqtigayaga
[ad_1] Jimicsiyada caanka ah ee HFamous ayaa sameeya dhammaadka xirfaddooda isboortiga, oo muxuu u eg yahay ciyaaryahanka kubadda cagta ee ugu quruxda badan Ruushka? Qeybta ugu dambeysa ee maqaalka ku saabsan gabdhaha quruxda badan ee isboortiga. Kan kowaad iyo kan labaad akhri qaybaha ku jira xiriirinta. Margarita Mamun Margarita Mamun toddobo jeer waxay noqotay horyaalnimada adduunka… Continue reading 35 cayaartooyda ugu quruxda badan dumarka waqtigayaga
5 shey oo timo ah ayaan marar badan soo iibsadaa
[ad_1] SHAAMO DAR, buufin qaabaynta dhalaalaya, muuska roodhida xididka iyo alaabooyin kale oo aan u isticmaalo dhibicdii ugu dambaysay. Sofia Vorobyova Tifaftiraha BeautyHack Shampoo si loogu daro mugga timaha Shampoo mugga dheeraadka ah iyo hagaajiyaha qaboojiyaha qaboojiyaha, Moroccanoil Nooca Moroccanoil ee Israa’iil ayaa timaheyga ka badbaadinayay qalalan iyo caajis muddo saddex sano ah.… Continue reading 5 shey oo timo ah ayaan marar badan soo iibsadaa
40 fikradaha manicure ciddiyaha cad
[ad_1] 40 fikradaha manicure manicure ciddiyaha cad [ad_2]
8 doorka ugu quruxda badan ee Angelina Jolie
[ad_1] V Bilowgii xirfadeeda, haweeneyda ugu quruxda badan adduunka, sida laga soo xigtay majaladda Vanity Fair, halkii ay ka ahaan lahayd dharka shaaha Madow, waxay ku socotay surwaal maqaar ah roogagga cas. Doorarka filimada ayaa ku habboonaa: Gia - moodel moodel leh oo leh maskax aan degganeyn, qurux badan oo qurux badan Lara Croft, cunugga Kate… Continue reading 8 doorka ugu quruxda badan ee Angelina Jolie
20 ikhtiyaar oo manicure ah oo dheereynaya ciddiyahaaga
[ad_1] 20 ikhtiyaar oo manicure ah oo dheereynaya ciddiyahaaga [ad_2]
10 xaqiiqooyin aadan ka ogeyn Elizabeth II
[ad_1] TOQueen of Great Britain waa boqorka ugu xukunka dheer dadka nool. Bishii Luulyo waxay xustay sannad -guuradii 65 -aad ee ka soo wareegtay markii la caleemo -saaray. Inta lagu jiro waqtigan, Elizabeth II waxay ku guuleysatay inay ka jawaabto 3.5 milyan oo xaraf, barato toddobada baadariga waxayna isu keentay aruurinta 5,000 koofiyadood. Xaqiiqooyinka ugu xiisaha badan ee ku saabsan boqoradda ayaa ku jira… Continue reading 10 xaqiiqooyin aadan ka ogeyn Elizabeth II
20 xiddigood oo xidha muraayadaha laakiin aadan garanayn
[ad_1] DF ama rooga gaduudan, waxay doortaan muraayadaha indhaha, oo waqtiga firaaqada ah ee filimaanta iyo dhacdooyinka bulshada, waxay si kibir leh u xirtaan muraayadaha dhakhtar qoray. Xulashada gaarka ah ee BeautyHack waxaa jira xiddigo aan ka baqayn in lagu tilmaamo "afar-indhood". I rumee, liistadu waxay noqon doontaa mid aad u han weyn haddii dad badan oo caan ah aysan sameynin… Continue reading 20 xiddigood oo xidha muraayadaha laakiin aadan garanayn
Jooji! 8 timo oo aad u da 'weyn
[ad_1] Jooji! Timaha timaha ee 8 oo aad u da 'weyn [ad_2]
15 TV -ga Brazil ayaa muujinaya rikoorro jebiyey xagga daawadayaasha
[ad_1] Laga soo bilaabo "Addoommadii Izaura" ilaa "Rajada Brazil"! On BeautyHack - taxanaha TV -ga Brazil ee ugu wanaagsan muddo 36 sano ah, oo laga sii daayay Ruushka. “Addoon Izaura” Taxanaha ayaa soo baxay Oktoobar 11, 1976. USSR, “Slave Izaura” waxaa lagu muujiyey 1988 -kii oo keliya - waa masraxa saabuunkii ugu horreeyay ee telefishanka Soofiyeeti.… Continue reading 15 TV -ga Brazil ayaa muujinaya rikoorro jebiyey xagga daawadayaasha
20 timo qurxoon oo timo fiican leh
[ad_1] BeautyHack waxay soo aruurisay xulasho timo caan ah oo guuleysta kuwaas oo si dabiici ah u dhaxlay dhuuban dhuuban. Iyo stylists iyo trichologists waxay u sheegeen sida loo daryeelo timaha noocaas ah iyo waxa loola jeedo sameynta qaabaynta. Vyacheslav Gordeev Top stylist of Nikolskaya Club salon Salty Dog Cocktail Beach Spray, Evo waxay iga caawisaa inaan timaha khafiifka ah u rogo mug weyn… Continue reading 20 timo qurxoon oo timo fiican leh
5 boodh wejiga ugu fiican sida ay qabaan akhristayaasha BeautyHack
[ad_1] LACAGTA laga bilaabo 799 ilaa 4,000 RUB, oo akhristayaasha BeautyHack ay adeegsanayeen sanado badan! Budada is haysta ee Prisme Visage, Givenchy Natalia Mikhalyuk-Nehme Dhowr iyo toban sano ayaa ka soo wareegtay, baakadii bakhtiinta Prisme Visage way is bedeshay, boodhkuna weli waa midka ay jecel yihiin gabdho badan. Waxaan ku bilaabi doonaa naqshadeynta iibiyahaan ugu fiican adduunka qurxinta qurxinta.… Continue reading 5 boodh wejiga ugu fiican sida ay qabaan akhristayaasha BeautyHack
Horudhaca Naaska: 8 Xiddigood oo leh Mammoplasty Fashilmay
[ad_1] Horusocodka Naaska: 8 Xiddigood oo leh Mammoplasty Fashilmay [ad_2]
15 xulasho ee ugu fiican xiddigaha
[ad_1] 15 fikradood oo ka yimid roogga gaduudan, oo ku habboon nolosha dhabta ah. Talooyinka farshaxanka qurxinta ayaa lagu daray! Qurxinta laydhka leh ee Hayley Bieber, sida Hailey, isla markiiba way qaboojisaa, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon meheradaha ugu adag Isniinta. Farshaxaniistaha Ksenia Nikitina ayaa ku talineysa in lagu dabaqo saldhigga Burburka Magaalooyinka hooska. “Waxay hadhka si ammaan ah u hayaan 24 saacadood. Waxaan doortaa satin… Continue reading 15 xulasho ee ugu fiican xiddigaha
Roman Moiseenko - ilaa lix qalad oo qaabaynta ah oo aad samayso
[ad_1] ROman Moiseenko waa mid ka mid ah tima jaraha iyo stylists -ka ugu caansan Ruushka. Wuxuu ka soo shaqeeyay mashaariic waaweyn sida “Warshadda Xiddigta”, “Farshaxanka Dadka”, wuxuu ahaa la-shaqeeyaha barnaamijka “Isla Markaaba Iska Qaad” ee STS. Roman wuxuu u sheegay BeautyHack sida si habboon loogu qalajiyo timahaaga, sababta aad ugu baahan tahay inaad beddesho kala tagga iyo waxa… Continue reading Roman Moiseenko - ilaa lix qalad oo qaabaynta ah oo aad samayso
sidaan tinta iyo qurxinta timahayga ugu sameeyay salon Art'Up
[ad_1] Halyeeyga Gthe ee mashruuca BeautyHack Katya waxay dhowr saacadood ku qaadatay Salon Art'Up oo ku taal Barkadaha Baadiyaha, halkaas oo ay ka heshay timo cusub oo aan caadi ahayn, dareenkeeda, qurxiyo. Stylist Eldar Adraev iyo agaasimaha farshaxanka Art'Up farshaxanka farshaxanka Alena Lapina ayaa ka hadlaya tijaabadooda. Kahor Kadib Eldar Adraev stylist -ka ugu sarreeya quruxda Art'Up… Continue reading sidaan tinta iyo qurxinta timahayga ugu sameeyay salon Art'Up
Talada Toddobaadka ee BeautyHack: Qaad Qubays Milix ah
[ad_1] Ha ku dhaafin waqtiga nacaybka noocaas ah (gaar ahaan dadka deggan magaalo -weynaha)! Haddii aad qabow tahay, daalan tahay, oo ku dhex milmay walaaca, dareemo in maqaarku noqday mid engegan oo jajaban, oo aad u xoogaystay tababarka - maydh oo isticmaal milixda aad ugu jeceshahay. Laga soo bilaabo khabiirada BeautyHack - lix doorasho oo la xaqiijiyay. Marka hore,… Continue reading Talada Toddobaadka ee BeautyHack: Qaad Qubays Milix ah
wadista tijaabada ee habka qaabaynta jirka oo aan xanuun lahayn
[ad_1] GBeautyHack Master Editor Karina Andreeva waxay tagtay saloon qurxoon “Millefeuille» On Frunzenskaya, waxay tijaabisay koorso toban hab oo jirka ah oo ku saabsan aaladda Icoon Laser ee Talyaaniga waxayna la wadaagtay aragtideeda. Been ma sheegi doono haddii aan idhaahdo ku dhawaad ​​haweeney kasta maanta waxay ku riyootaa shaxan iyo maqaar caafimaad qaba. Qof ayaa nasiib u leh hiddo -wadaha,… Continue reading wadista tijaabada ee habka qaabaynta jirka oo aan xanuun lahayn
Isla markiiba soo bixi! 10 xiddigood oo aan garaacin
[ad_1] Geedka Ha kaliya ma cusboonaysiin karo timo -jarka caajiska ah, laakiin sidoo kale muuqaal ahaan wuxuu beddeli karaa saamiga wejiga. Oo haddii kiiska koowaad ay yar yihiin fursadaha guul -darradu, marka labaad wax walba aad bay uga sii adag yihiin. Tusaale ahaan, baangada tooska ah kuma habboona haweenka leh qaab wejiga afargeeslaha ah, kuwa gaagaaban waxay… Continue reading Isla markiiba soo bixi! 10 xiddigood oo aan garaacin
33 timo casri ah oo la go'aaminayo kahor 33
[ad_1] TOcascading timo jarista, baangada, mohawks -ka, feeraha feerka iyo faraska - maxaad weli isku dayin? Xagee lagu sameeyaa: HAIRDRYER Bar qalalan (Bolshaya Dmitrovka, 16/1, cinwaanada oo dhan waa laga arki karaa halkan) Qiimaha halkii rakibaadda: 1 400 rubles. (tolidda), 2,000 rubles. (maalin kasta), 3,500 rubles. ("Boogie Woogie"). Bar & Quruxley (Bolshaya Dmitrovka, 16; Malaya Bronnaya,… Continue reading 33 timo casri ah oo la go'aaminayo kahor 33
Ma aqoonsan tahay? Sida geesinimada taxanaha TV -ga cibaadadu u bislaadeen
[ad_1] Hit wuxuu ka yimid Luisana Lopilato oo ka yimid Rebel Spirit iyo taxanaha TV -ga ee Claire Danes ka garab ciyaaray Jared Leto? BeautyHack waxay daaha ka qaadaysaa waxa dhallinta caanka ah ee 90 -meeyadii iyo 2000 -meeyadii ay hadda sameynayaan. Mischa Barton (Marissa Cooper ee taxanaha TV -ga “OS - Hearts Lonely Hearts”) Qeybtii koowaad ee taxanaha caanka ah ayaa la siidaayay… Continue reading Ma aqoonsan tahay? Sida geesinimada taxanaha TV -ga cibaadadu u bislaadeen
6 alaab oo kaamil ah oo aan ku soo iibsado marar badan
[ad_1] Dhoobada balaariyay, casaan, wareegyada indhaha hoostooda - dhibaatooyin la yaqaan? Waxay qaadataa dadaal iyo lacag badan si loo abuuro codka ugu fiican. Waxaan kaga hadlayaa kuwa aan ugu jeclahay qaybta "Ilaa dhibicda ugu dambaysa." Sofia Vorobyova Tifaftiraha BeautyHack oo saxaysa kareemka wejiga CC Red, Erborian Isbeddelka mucjisada ah ee cagaaran ilaa beige waa… Continue reading 6 alaab oo kaamil ah oo aan ku soo iibsado marar badan
15 caan ah oo leh sunniyo qumman
[ad_1] NS Qaabka si fiican loo doortay ee sunnayaasha ma aha oo kaliya inuu ka dhigo muuqaalka mid furfuran, laakiin sidoo kale wuxuu qaabeeyaa saamiga saxda ah ee wejiga. Xaaladdan oo kale, farshaxan -yahannada qurxinta ugu fiican adduunka waxay ka taliyaan in la raaco moodada. In kasta oo xaqiiqda ah in sunnayaasha balaaran ee duurka ah weli aysan "ka tagin" daafaha adduunka, foomkan… Continue reading 15 caan ah oo leh sunniyo qumman
10 Tatina Angelina Jolie waa inaad ka ogaataa
[ad_1] MHa lix carruur ah iyo Danjiraha Wanaagsan Angelina Jolie waa taageere tattoos. Heeroglyph -ka loogu magac daray “geerida” ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee ka muuqda jirka aktarada. Dhowr sano ka dib, Angie wuu ka takhalusay, isagoo ku beddelay Tattoo Buddhist “Tai wuxuu u duceeyaa badbaadin.” Dhammaan “farshaxanka” ku yaal jirka xiddigta waxay leeyihiin… Continue reading 10 Tatina Angelina Jolie waa inaad ka ogaataa
maxay yihiin xiddigaha diyaar u ah xirfad darteed?
[ad_1] V Da'dee ayay Bella Hadid heshay rhinoplasty -kii ugu horreeyay, iyo gobolkee buu Kylie Jenner u keenay muuqaalkeeda cusub? Sababtoo ah doorar cusub, qandaraasyo iyo mashaariic ganacsi, xiddigaha ayaa diyaar u ah cirbadaha Botox oo aan waxyeello lahayn iyo qalliin caag ah oo halis ah. Cher Cher waa 72 jir, badhkoodna kuwan… Continue reading maxay yihiin xiddigaha diyaar u ah xirfad darteed?
Yaa aan la socon timo gaaban
[ad_1] Ma waxaad rabtaa inaad cusboonaysiiso sawirka ama aad beddesho sawirka? Waqtigaaga qaado si aad u gaarto go'aamo adag - isbeddellada timo -goynta mar walba ma gaaraan filashooyinka. Haddii aad rabto rabitaanka timo gaaban, marka hore go'aanso haddii dhererkani kugu habboon yahay. BeautyHack waxay ku saabsan tahay qofka aan jecleyn timaha gaaban.… Continue reading Yaa aan la socon timo gaaban
Ma iloobi kartid inaad iibsato? 10ka ugu sarreeya alaabta cusub ee kulul ee toddobaadka
[ad_1] Farshaxanka fanaaniinta, biyaha ubaxa ee wejiga, dhejisyada - ilaaliyayaasha qoyaanka iyo waxyaabaha cusub ee toddobaadkan oo mudan inaad fiiro gaar ah u yeelato. Massager oo ka soo horjeeda laalaabkii Duugista Duugista Maskaxda, MIZUHI Wax ku ool, fudud, miisaaniyad - tani waxay ku saabsan tahay qalabka cusub ee quruxda Japan ee MIZUHI, oo dhowaan laga iibsan karo L'Etoile. Waxaan ka wada hadalnay… Continue reading Ma iloobi kartid inaad iibsato? 10ka ugu sarreeya alaabta cusub ee kulul ee toddobaadka
Polina Gagarina iyo xiddigo kale oo Ruush ah oo miisaankoodu aad u yaraaday
[ad_1] WAXYAABO, nafaqo habboon ama cunto adag - maxaa ka caawiyay Polina Gagarina, Svetlana Khodchenkova, Anastasia Denisova iyo xiddigaha kale inay qaab yeeshaan? Polina Gagarina “Warshadda Xiddigta” Polina uma ekeyn sida ay hadda tahay. Ujeedduna ma aha in markaa iyadu ma lahayn timo -jaris saxeexan iyo timo cad oo platinum ah.… Continue reading Polina Gagarina iyo xiddigo kale oo Ruush ah oo miisaankoodu aad u yaraaday
18 qurux ayaa ka jabtay khabiir ku takhasusay cilmiga trichologist iyo stylist
[ad_1] IYO khabiir ku takhasusay cilmiga trichologist Tamara Berechikidze iyo stylist Alexei Nagorskiy ayaa ka hadlaya sida loo daryeelo timahaaga, qaabka khafiifka ah iyo mugga aan lahayn, dabciga dabiiciga ah ee curly ama dheer. Timo dheer oo qaro weyn Tamara Berechikidze Musharraxa Cilmiga Caafimaadka, dhakhtarka maqaarka-cosmetologist, trichologist 1) Haddii aad leedahay timo dheer, culus, dooro shanlo alwaax leh shanlo wanaagsan… Continue reading 18 qurux ayaa ka jabtay khabiir ku takhasusay cilmiga trichologist iyo stylist
Sidee loo hagaajiyaa maqaarka? Cosmetologist ayaa la taliya
[ad_1] TAsya Al-Carabi, oo ah khabiir ku takhasusay qurxinta maqaarka ee DIBI Milano ee Ruushka, ayaa u sheegay sida loo daryeelo maqaarka, waa maxay xannibaadda epidermal iyo inay suurtagal tahay in kor loo qaado waxtarka kareemka. Asya Al-Carabi Tababaraha-ku-xeel-dheeraha DIBI Milano ee heerka caalamiga ah ee Ruushka Wax nooga sheeg daryeelka maqaarka habboon: sida loo doorto… Continue reading Sidee loo hagaajiyaa maqaarka? Cosmetologist ayaa la taliya
Sida bushimaha loogu weyneeyo qurxiyo: talooyin ka yimid fannaaniinta qurxinta
[ad_1] TOW Maxay yihiin qaybaha ku jira dhaldhalaalka dibnaha, sida loo sameeyo saamaynta ombre, iyo sida si sax ah loogu sawiro dusha qalin? Xoqo bushimahaaga ka dibna ku dabool midabada kala duwan ee lipstick Lisa Eldridge Isticmaal xoqidda dibnaha ka hor intaadan bilaabin qurxinta. Kiko's Scrub & Peel Tipes ma aha oo kaliya inay ka saaraan qaybaha maqaarka ee dhintay,… Continue reading Sida bushimaha loogu weyneeyo qurxiyo: talooyin ka yimid fannaaniinta qurxinta
waji -xidhka ugu fiican oo leh miraha laga soo saaro
[ad_1] NSapaya, qaraha, strawberry, tufaaxa iyo avokado ma aha cunto karis loogu talagalay smoothie caafimaad leh oo xitaa ma aha maaddooyinka salad khudradda, laakiin caawiyayaasha quruxda dhabta ah ee kuwa maqaarkoodu u baahan yahay soo -kabashada iyo fuuq -celinta. Tifaftirayaasha BeautyHack waxay tijaabiyeen maaskaro ugu wanaagsan oo leh miraha laga soosaaray waxayna soo saareen xukunkooda. Isku -dheelitirnaanta maaskaro iyo miro soosaarka miro -dheelitirka… Continue reading waji -xidhka ugu fiican oo leh miraha laga soo saaro
Qaabaynta dhinac-dhinac: 15 tusaalooyin xiddigaha ugu fiican
[ad_1] TOP -ga goos goosku wuxuu awood u leeyahay inuu sameeyo ficil kasta oo timo -goyn ku habboon, milkiilayaasha timaha khafiifka ahna gebi ahaanba lama beddeli karo. Halkaan waxaa ah tusaalooyinka ugu fiican xiddigaha timaha dhinac-ka-baxa iyo sida loo soo celiyo oo looga fogaado khaladaadka. Wavy bob Dhinaca kala goynta oo ay weheliso curls dherer dhexdhexaad ah ayaa u oggolaanaya kaliya inaan garaacin… Continue reading Qaabaynta dhinac-dhinac: 15 tusaalooyin xiddigaha ugu fiican
Qurxinta dubista - sida loo celiyo
[ad_1] Vizagist Christina Novikova - oo ku saabsan sida (iyo haddii ay mudan tahay) in la sameeyo dubista naftaada iyo alaabooyinka ku habboon qurxintaas. Christina Novikova visagiste Waa maxay dubista? Cunto-dubistu waa, ugu horrayn, masrax-ka-samays, oo loo adeegsado filimada, tiyaatarada iyo roogga cas. Qurxinta noocan oo kale ah waxaa jecel dadka… Continue reading Qurxinta dubista - sida loo celiyo
Ha ku celin! 25 timaha caanka ah ee musiibada leh ee timaha oo dhan
[ad_1] DJennifer Lopez waxay u timid Oscars -kii 2002 iyada oo ay la socoto trapeze, Kristen Stewart waxay si joogto ah ugu kicisaa sawir qaadayaasha iyo kuwa naqdiya timaha qosolka leh. BeautyHack waxay lahayd madadaalo badan oo ay ka wada hadlaan guuldarrooyinka xiddigaha qaab -dhismeedka sare ee Ivan Anisimov. Ivan Anisimov oo ah hay'adda ugu sarreysa sawirrada stylist Safaaradda Qaabka Jennifer Lopez Markii hore waxaan mooday in sawirku… Continue reading Ha ku celin! 25 timaha caanka ah ee musiibada leh ee timaha oo dhan
10 quruxda ugu xun ee taxanaha TV -ga
[ad_1] TOovarious Maiza oo ka socda taxanaha TV -ga “Clone”, Munaafiqiinta Esmeralda oo ka socda “Xeebta Riyo” iyo 8 door oo xusuusta badan oo sharwadayaal ah. Daniela Escobar (Maiza). Taxanaha '' Clone '' Doorka masiixa oo aan aad ugu faraxsanayn Maiza waa shaqada ugu weyn ee ugu horreysa ee atariishada bilowga ah ee Daniela Escobar. Dabeecadda ayaa isu beddeshay mid aan mugdi ku jirin:… Continue reading 10 quruxda ugu xun ee taxanaha TV -ga
Sida jilayaashii Ujeeddada Waxashnimada ah isu beddeleen
[ad_1] labaatan sano ka hor, Maarso 5, 1999, la -sii -deynta afaraad iyo tan ugu caansan filimka sheekada “Xiriirrada Khatarta ah” ee uu qoray Choderlos de Laclos. Ficilku wuxuu ka guuray qarnigii 18aad ilaa qarnigii 20aad, halkii uu ka ahaa Faransiiska, shaashadaha ayaa ka soo muuqday New York oo qurux badan. In kasta oo aad qorsheyneyso inaad dib u daawato Ujeeddooyinka Qallafsan, BeautyHack… Continue reading Sida jilayaashii Ujeeddada Waxashnimada ah isu beddeleen
Sida loo daryeelo maqaarkaaga guga: talo ka timaadda dhakhtarka maqaarka
[ad_1] Daryeelka xaafadda iyo adeegsiga waxyaabaha xasaasiga ah xilliga qabow ma dammaanad qaadayaan in maqaarku u ekaan doono mid aan iin lahayn bilowga diirimaadka. Waa maxay sirta quruxda ee kaa caawin doonta daryeelka noocyada maqaarka ee kala duwan iyo sida loo doorto badeecadda ugu fiican? Jawaabaha su'aalahan ayaa hore loo ogaaday… Continue reading Sida loo daryeelo maqaarkaaga guga: talo ka timaadda dhakhtarka maqaarka
20 xiddigood oo aan is qaadan
[ad_1] WITHS Dhibaatooyinka, khiyaamooyinka, baaritaannada Hollywood ma aha wax aan caadi ahayn Xulashada BeautyHack waxaa ku jira 20 xiddigood oo aan u badnayn inay waligood helaan luqad guud. Madonna vs Gwyneth Paltrow Aktarada ku guuleysatay Oscar iyo boqoradda pop ayaa inta badan looga hadlaa saaxiibo la dhaariyey. Madonna iyo Gwyneth waxay lahaayeen xiriir diirran muddo dheer, xitaa waxay waceen… Continue reading 20 xiddigood oo aan is qaadan
30 xusuusta quruxda ugu qosolka badan
[ad_1] 30 xusuusta quruxda ugu qosolka badan [ad_2]
10ka haween ee ugu quruxda badan madaxtooyada
[ad_1] Laga soo bilaabo haweenka Faransiiska Brigitte Macron ilaa marwooyinka koowaad ee Azerbaijan iyo Cote d'Ivoire. Melania trump wareysigii ugu dambeeyay ee aan ku jirin xaaladda marwada koowaad, Melania waxay siisay 2016 GQ -ga Mareykanka. Ka dib xiddiggu wuxuu si qarsoodi ah ula wadaagay wararka nolosha wuxuuna kaliya "isku dayay" doorka… Continue reading 10ka haween ee ugu quruxda badan madaxtooyada
5 aasaaska weyn ee maqaarka qalalan
[ad_1] Tan on-line oo ku saleysan biyaha ubaxa lotus, kareemka BB oo leh saamayn daryeel oo aad u fiican iyo daah-fur kale oo maqaarka qalalan-maqaal cusub oo uu qoray tifaftiraha guud ee BeautyHack Karina Andreeva@kandreevaa… Karina Andreeva Chief Tifaftiraha BeautyHack Waxaan leeyahay maqaar u nugul qalalan, sidaa darteed waxaan u soo dhowaanayaa doorashada aasaaska… Continue reading 5 aasaaska weyn ee maqaarka qalalan
Sunnooyinka Fairy: sida loo sameeyo qaabka kaamil ah
[ad_1] Farshaxanka quruxda Vand Kelly Baker wuxuu ka shaqeynayay Hollywood muddo 17 sano ah, halkaas oo gabadha loogu yeero "cirfiidka sunnayaasha." Liiska macmiilkeeda waxaa ka mid ah dhammaan qabiilka Kardashian-Jenner, Shay Mitchell, Cardi B, Zendaya, Ariana Grande, kabka Game of Thrones iyo darsin kale oo xiddigo ah. V Instagram Kelly noloshiisu waa… Continue reading Sunnooyinka Fairy: sida loo sameeyo qaabka kaamil ah
Waayahay! Maanta sidee bay u eg yihiin atariishooyinka carruurta ku jilay taxanaha TV -ga Brazil?
[ad_1] V Sannadihii 1990-meeyadii, hiwaayad cusub ayaa ka dhex muuqatay nolosha qoyska “Soviet-ka ka dib”-daawashada taxanaha TV-ga. Wakhtiyada aan sidaa u fogeyn, cajalladuhu waxay ahaayeen dhif - si aad u ogaato sida telenovelaku ku dhammaan doono, fiid kasta waa inaad wax walba iska dhigtaa oo aad shaashadda fadhiisataa. Geesiyaasha… Continue reading Waayahay! Maanta sidee bay u eg yihiin atariishooyinka carruurta ku jilay taxanaha TV -ga Brazil?
sida aan u tijaabiyey Achromin laba toddobaad
[ad_1] NSR Xusuusnow kareemka caddeynta ee caanka ah ee ku jira baakadaha casaan iyo beige, kaas oo lagu arki karo musqusha guri kasta oo Soofiyeeti iyo Soofiyeeti ka dambeeya? Tan iyo markaas, summaddu waxay hagaajisay isku -darka, waxay gashay dib -u -habeyn waxayna ka muuqatay khaanadaha dukaanka nooc cusub (gudaha iyo dibaddaba). Tifaftiraha BeautyHack Yulia Kozoliy ayaa ka tagtay caadadeedii caadiga ahayd… Continue reading sida aan u tijaabiyey Achromin laba toddobaad
sidee xiddiguhu noo qosliyeen 1 -dii Abriil?
[ad_1] Laga soo bilaabo uurka kahor furitaanka: BeautyHack - oo ku saabsan kaftankii xiddigaha ee shalay, oo aan ku dhowaanay Justin Bieber Shalay lamaanaha Bieber waxay wadaageen warka wanaagsan - Haley waxay filaysaa ilmo. Caddayn ahaan, Justin wuxuu dhajiyay sawir ultrasound ah oo leh uurjiif: qof ayaa ku degdegay inuu u hambalyeeyo lammaanaha, kuwa kalena way shakiyeen - waa maxay wax ku oolnimada… Continue reading sidee xiddiguhu noo qosliyeen 1 -dii Abriil?
8 Miss World oo leh masiir xiiso leh
[ad_1] 8 Miss World oo leh qaddar xiiso leh [ad_2]
6 khaladaad qaabaynta aad samayso
[ad_1] MAXAY ku -xadgudubka alaabada qurxinta u horseedi kartaa, sida loo doorto shanlada ku habboon qaabaynta iyo sababta timuhu ugu baahan yihiin in loo oggolaado inay qaboojiyaan? WELLA Khabiir Qaran Igor Kimyashov - oo ku saabsan khaladaadka ugu badan ee aad sameysid marka aad qurxinaysid timahaaga. Khabiirka Qaranka Igor Kimyashov WELLA Qalad # 1:… Continue reading 6 khaladaad qaabaynta aad samayso
10 xiddigood oo caan ku noqday carruurnimadii
[ad_1] V Waa maxay filimkii Angelina Jolie ay ciyaartay markay ahayd 6 jir, sidee ayay Drew Barrymore ku heshay doorkeedii ugu horreeyay markay ahayd 11 bilood iyo filimkeedii caanka ahaa ee aad ku arki karaysay Elijah Wood yar? Xulashada gaarka ah ee BeautyHack, waxaa jira xiddigo ka soo muuqday shaashadaha TV -ga ilmo ahaan.… Continue reading 10 xiddigood oo caan ku noqday carruurnimadii
Dhib malahan? 10 -ka lamaane ee ugu quruxda badan farqiga da'da weyn
(ad_1] Bogga BeautyHack waxaa ku jira toban lamaane oo aad u qurux badan oo xiddigaha ah kuwaas oo da'doodu aysan caqabad ku ahayn. Nick Jonas iyo Priyanka Chopra… Continue reading Dhib malahan? 10 -ka lamaane ee ugu quruxda badan farqiga da'da weyn
sidaan u nimid mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan ee timaha looga saarayo
[ad_1] NSWinter, laser, ultrasonic, photo-, electro-… Qarnigii 21aad, erayga “epilation” wuxuu leeyahay kala duwanaansho badan, waxaanna leenahay habab kala duwan oo timaha looga saaro. Hadda waxaa lagu samayn karaa xitaa guriga, oo aan lahayn xanuun, dareen -celin maqaarka iyo dhibaatooyin kale, iyo tan ugu muhiimsan: riyada gabdhaha oo dhan - si looga takhaluso… Continue reading sidaan u nimid mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan ee timaha looga saarayo
10 xiddigood oo ka faa'iideystay qaliin caag ah
[ad_1] BElla Hadid, Megan Fox iyo Blake Lovely waligood si cad ugama dhawaaqin qalliinnada caagga ah. Laakiin waxaa la ogyahay in xirfadaha gabdhuhu ay sare u kaceen ka dib isbeddel weyn oo xagga muuqaalka ah. Yaa kale oo odhanaya “mahadsanid” dhakhaatiirta qalliinka caagga ah - ee ku jira maaddada BeautyHack! Megan Fox Continue reading 10 xiddigood oo ka faa'iideystay qaliin caag ah
Maria Ginzburg iyo Rasida Lakoba-oo ku saabsan mashruuca cusub The-Face-Only
[ad_1] NSW maxaad u bilaawday booqashada qurxiyaha laakiin aadan heli karin waqtiga? Mise waxaad ka baqaysaa dhakhaatiirta ku jirta jaakadaha shaybaadhka iyo irbadaha? Iska ilaali cabsidaada: mashruuc cusub Wajiga kaliya ayaa adiga laguu abuuray-kuwa doonaya inay daryeelaan maqaarkooda oo badbaadiyaan waqtigooda. Qaabka soo-bixitaanku ma tilmaamayo hab-raacyada naxdinta leh ama… Continue reading Maria Ginzburg iyo Rasida Lakoba-oo ku saabsan mashruuca cusub The-Face-Only
5 isbeddellada quruxda laga bilaabo Toddobaadka Fashion -ka ee Moscow oo aan jecel nahay
[ad_1] Mercedes-Benz Fashion Week Russia badanaa waxay raacdaa usbuucyada moodada ee New York, London, Milan iyo Paris. Sannadkan, naqshadeeyayaasha Yulia iyo Alisa Ruban, Alena Akhmadullina, Alexander Arutyunov ayaa ka qaybgalay dhacdada moodada. Waxaan fiiro gaar ah u yeelannay isbeddellada quruxda adduunka, kuwaas oo si fiican loogu habeeyay waddooyinka Moscow. Saamaynta timaha qoyan Mid ka mid ah… Continue reading 5 isbeddellada quruxda laga bilaabo Toddobaadka Fashion -ka ee Moscow oo aan jecel nahay
waxa ku dhacay ka -qaybgalayaashii xaqiiqadii ugu horreysay ee Ruushku tuso
[ad_1] V Bilowgii sanadihii 2000 -meeyadii, qaab cusub ayaa ka soo muuqday telefishinka Ruushka - bandhig dhab ah. Si joogto ah, malaayiin daawadayaasha TV -ga ah ayaa wax walba u tuuray sabab la xiriirta arrin cusub oo ah “Behind the Glass” ama “The Last Hero”. Maxaa ku dhacay xiddigaha shaashadda TV -ga, ee jaceylka ku dhisay… Continue reading waxa ku dhacay ka -qaybgalayaashii xaqiiqadii ugu horreysay ee Ruushku tuso
[ad_1] Rum, Aparty rum, saliid safar, lugaha daalan oo buufinaya iyo inbadan oo ka mid ah uruurinta alaabada cusub ee toddobaadkan. Saliidda timaha ee Tahitian Monoi, Alan Hadash Calaamadda Alan Khadash, oo isku daraysa caadooyinka Israa’iil iyo farsamooyinka casriga ah ee Jarmalka, ayaa ka soo muuqatay Ruushka waqti aan fogeyn, sidaa darteed waxaan rabnaa inaan ku xusuusinno ururinta… Continue reading Ma iloobi kartid inaad iibsato? 10ka ugu sarreeya alaabta cusub ee kulul ee toddobaadka
Xulashada Tifaftirayaasha: Top 10 ceeryaamo & Buufinnada Wajiga
[ad_1] Vesna! Tani waxay ka dhigan tahay in waqtigii dhiiranaanta iyo cufnaanta culus dhammaatay. Buufinta iyo uumiga hawada ayaa safka xiga. Tifaftirayaasha BeautyHack waxay tijaabiyeen “saaxiibbada ugu fiican” maqaarka biyo -galeenka ah. Dheecaanka qoyan Glacial Spray Lotion, Skyn ​​Iceland Waxaa tijaabiyey tifaftire sare BeautyHack Anastasia Speranskaya Fiiro, fiiro gaar ah, dadka deggan megalopolises (oo kaliya ma aha)! La helay… Continue reading Xulashada Tifaftirayaasha: Top 10 ceeryaamo & Buufinnada Wajiga
Doorashada Xiddigaha: 12ka Udgoon ee ugu sarreeya
[ad_1] Hatalya Vodianova, Angelica Timanina, Maria Ivakova iyo xiddigo kale - oo ku saabsan udugga ay jeclaayeen sanado badan! Xulashada soo -jeediyaha TV -ga Maria Ivakova: Sawirka Marwadda, Frederic Malle Waxaan u arkaa sawirka kulul ee basbaaska kulul ee Frederic Malle inuu yahay udugga saxeexa - waxaan haystaa… Continue reading Doorashada Xiddigaha: 12ka Udgoon ee ugu sarreeya
Xigashooyinka ugu qosolka badan taxanaha TV -ga cibaadada ee 90 -maadkii
[ad_1] V Horraantii 90naadkii, daawashada bandhigyada TV -ga fiidkii dhab ahaantii waxay ahayd dhaqan qoys kasta. Qaarkood waxaa lagu qasbay inay ooyaan oo u damqadaan geesiyaasha, qaarna qoslaan, iyagoo helaya "qayb" ah endorphins oo dhiigga ku jira. Oo maadaama qosolku cimriga sii dheereeyo, BeautyHack waxay soo uruurisay xigashooyinka ugu fiican… Continue reading Xigashooyinka ugu qosolka badan taxanaha TV -ga cibaadada ee 90 -maadkii
12 fikradaha manicure ee hooska ugu weyn ee 2019
[ad_1] DHAQAALAHA GUUD ee lambarkiisu yahay 16-1546 waa midabka ugu weyn ee 2019 sida uu qabo Machadka Midabka Pantone. Ka dib markii wax ku saabsan alaabada quruxda ee hooska wanaagsan ee rajada leh, waxaan daabacnaa xulashooyinka manicure -ka iyo saloonyada, halkaas oo mid walba si fudud loogu celin karo! Xagee lagu sameeyaa: Qolka Quruxda ee Aagga Quruxda Cinwaanka: Moscow, 1st Smolensky per.,… Continue reading 12 fikradaha manicure ee hooska ugu weyn ee 2019
7 isbeddellada qurxinta arooska ee aroosyada 2019
[ad_1] Farshaxanka qurxinta ku -tiirsan ee Yulia Kupriy (@kupryimakeup) ayaa u sheegay fallaadhaha ku habboon xilligan arooska, sababta aroosad kastaa ay boorsadeeda ugu haysato calaamad muujinaysa iyo dibnaha casaanka ah. Julia Kupriy Farshaxaniiste madax -bannaan oo madaxbannaan “Durba maanta, aroosyada mustaqbalka waxay fiirinayaan joornaalada iyagoo raadinaya qurxinta arooskooda kaamil ah. Midabada pastel iyo qurxinta matte… Continue reading 7 isbeddellada qurxinta arooska ee aroosyada 2019
Maxaa ku dhacay? Ups and Downs of Actresses -ka Brazil
[ad_1] Taxanaha TV -ga reer Brazil ee V 90s wuxuu ahaa kan ugu sarreeya caankooda. Kuwa aan xiisaynaynin waxa ay jilaayaasha caanka ahi sameeyaan muddo 15 sano ah way ku farxi doonaan: waxay galaan qandaraasyo xayaysiisyo malaayiin doolar ah, waxay dhalaan carruur waxayna sii wadaan inay ciyaaraan. Waxaa jira sagaal xiddigle telefishan oo leh nolosha ugu xiisaha badan BeautyHack.… Continue reading Maxaa ku dhacay? Ups and Downs of Actresses -ka Brazil
6 moodeel-ka-baxsan oo beddelay warshadaha
[ad_1] V Midowga Yurub wuxuu ka fog yahay habka kaliya ee looga dhex muuqdo warshadaha moodada. Waxaa jira tusaalooyin marka, marka la fuulo daboolka Vogue -ka Mareykanka, moodellada ay dhulka ka baxaan iyagoo leh dhibaatooyin aad u daran sida isirka. Qiyaastii lix gabdhood oo geesi ah oo leh muuqaal aan caadi ahayn - oo ku jira maaddada BeautyHack. Beverly Johnson Beverly waa mid… Continue reading 6 moodeel-ka-baxsan oo beddelay warshadaha
5 jirka iyo timaha udgoon ee gu'ga la jecel yahay
[ad_1] VSpring ee Moscow gabi ahaanba wuu ka duwan yahay oo aad looma saadaalin karo: ha ahaato kuleyl degdeg ah ugu yaraan +10, cimilada diiran (oo kulul xitaa jaakadda maqaar) iyo qorraxda dhalaalaya, ama baraf xoog leh iyo ka goynta heerkulbeegga maalinta xigta. Si aysan niyaddaadu u boodin, sida cimilada,… Continue reading 5 jirka iyo timaha udgoon ee gu'ga la jecel yahay
10 xiddigood oo beddelay tirooyinkooda ka baxsan aqoonsiga
[ad_1] Sida Jessica Simpson u tuurtay 30 kg, waa maxay sirta wada noolaanshaha Victoria Lopyreva iyo maxaa ka caawiyay Polina Gagarina inay lumiso miisaanka? Dadka caanka ah ee beddelay tirooyinkooda ka baxsan aqoonsiga waxay ku jiraan ururinta BeautyHack. Jessica Cypson Jessica dhererkeedu waa 161 cm, miisaanka caadiga ah waa 55 kg. Simpson wuxuu u nugul yahay cayilnaanta wuxuuna helay… Continue reading 10 xiddigood oo beddelay tirooyinkooda ka baxsan aqoonsiga
Si taxaddar leh! 22 timo xiddigle oo timahaaga burburiya
[ad_1] TOWaa maxay timaha iyo qaabaynta waa inaan la samayn maalin kasta? Wax ka qabashada stylists. Artak Hayrapetyan, stylist at Beauty Stop26: 1. Combs Mabda'a shanleynta ayaa ah in si ula kac ah timaha loogu qaldo mugga. Laakiin taas awgeed, qaab -dhismeedka dusha timaha ayaa la khalkhal geliyaa: miisaanku wuu kala soocan yahay midba midka kale, maadaama… Continue reading Si taxaddar leh! 22 timo xiddigle oo timahaaga burburiya
20 xiddigood oo aan weligood qurux lahayn ayaa fashilma
[ad_1] TOWaa maxay alaabada ay xiddiguhu u adeegsadaan qaabaynta kaamil ah iyo sida loogu celceliyo qurxinta Natasha Poly rooga cas? Qaybta labaad ee maaddadu waxay ku saabsan tahay gabdhaha aan lahayn kabaha silsiladda. Akhri iskuxirka koowaad. Koontada rasmiga ah ee Instagram Sienna Miller Sienna waxay leedahay hal sawir oo keliya, laakiin waxaa jira astaamo kale gabi ahaanba… Continue reading 20 xiddigood oo aan weligood qurux lahayn ayaa fashilma
20 barkin oo ugu fiican guga
[ad_1] TOO sidee loo helaa daboolida ugu khafiifsan iyo barkinta ku daboolan wareegyada indhaha hoostooda iyo calaamadaha kale ee daalka? Farshaxaniistayaasha qurxinta iyo kuwa wax qora ayaa ka hadlaya aaladaha ay u adeegsadaan shaqada iyo nolosha. Victoria Moiseeva Farshaxanka qurxinta madaxa -bannaan, blogger Cushion Air Fit, A'pieu Dhaqdhaqaaqa suufka ayaa ka bilaabmay summaddan, oo hadda… Continue reading 20 barkin oo ugu fiican guga
20 hooska casaanka ah ee casriga ah ee ubaxyada
[ad_1] Vizazhist Evgenia Rusinovskaya waxay u sheegtay sida loo helo hooska ugu fiican ee lipstick -ka, waxayna la wadaagtay alaabteeda ay ugu jeceshahay blondes. Evgeniya Rusinovskaya Visagiste Markaad dooranayso midabka faruuryaha, ka sii gudub nooca midabka (diirimaad ama qabow) iyo hooska timaha. Midabada diirran waxay ku habboon yihiin gabdhaha leh ubax diirran; kuwa qabow, ee… Continue reading 20 hooska casaanka ah ee casriga ah ee ubaxyada
12 Timaha timaha ee Angelina Jolie ee ku habboon qof walba
[ad_1] BeautyHack waxay u dooratay timo fudud oo wejiyo badan xiddigga waxayna weydiisatay stylist Anna Portkova inay faallo ka bixiso. Anna Portkova Trichologist-consultant Bundles, mugga taajka, kala goynta, timaha gadaal u jeexan, garaacaan-Stylists Angelina waxay leeyihiin xeelado aad u fudud! Waxaas oo dhan waxaa lagu samayn karaa guriga, ilaa aad haysato isku mid… Continue reading 12 Timaha timaha ee Angelina Jolie ee ku habboon qof walba
Sauna infrared: faa'iidooyin iyo waxyeelo
[ad_1] V Waxaad ku isticmaali kartaa sauna infrared sauna xarun jimicsi oo casri ah ama qolka quruxda - waxay caan ku tahay dadka ilaaliya quruxda iyo caafimaadka. Mowjadaha infrared -ku waxay leeyihiin saamayn togan, oo si qoto dheer u dhex gala jidhka, una kululaada. Ma jirto qoyaan ku jira waabga, kaas oo kordhiya dhididka kana saara sunta… Continue reading Sauna infrared: faa'iidooyin iyo waxyeelo
4 saloon oo qurxoon oo cusub oo la booqdo
[ad_1] Meesha quruxda badan, oo qof walba ka ogyahay daryeelka maqaarka wajiga, mashruuca cusub ee stylist Yegor Ryabushko. The-Face-Only waxaa ikhtiraacay laba gabdhood oo aad u mashquulsan: abuuraha sumadda Rasario Rasida Lakoba iyo aasaasaha silsiladda salon & Wax & Go Maria Maria Ginzburg. Waxay leeyihiin toddoba carruur ah laba. Sidaa darteed,… Continue reading 4 saloon oo qurxoon oo cusub oo la booqdo
Si fudud u dhalaalaya: dib -u -eegis ku saabsan alaabooyinka dhaldhalaalaya ee ugu fiican
[ad_1] Tifaftirayaasha RBeautyHack waxay tijaabiyaan indho -sarcaadyada ugu fiican, muujiyayaasha sare, budo iyo dhaldhalaal leh dhaldhalaal jilicsan oo dhalaalaya oo meel sare ka muuqda. Highlighter Maqaarka Jacaylka Glow Glaze Stick, Becca Choice oo ah tifaftiraha sare ee BeautyHack Anastasia Speranskaya Bishii Maarso, Becca waxay soo bandhigtay ururinta cusub, Jaceylka Maqaarka, oo ay ku jiraan badeecado lagu calaamadiyay deegaanka. Waxay ka kooban tahay wax kasta… Continue reading Si fudud u dhalaalaya: dib -u -eegis ku saabsan alaabooyinka dhaldhalaalaya ee ugu fiican
sidaan u tijaabiyay nidaamka Dermadrop
[ad_1] Iyada oo tifaftiraha sare ee BeautyHack uu aaday rugta qurxinta hal -abuurka ee Gen87 si loo tijaabiyo nidaamka Dermadrop. Yaa ku habboon oo ma loo tixgelin karaa inuu yahay analog aan xanuun lahayn ee biorevitalization? Tifaftiraha Sare ee Anastasia Speranskaya BeautyHack Qorraxdu waa kulushahay, dabayshu way dhacaysaa, baytariyadu waa engegayaan - maqaar kasta ma awoodo… Continue reading sidaan u tijaabiyay nidaamka Dermadrop
30 ikhtiyaar oo manicure ah oo loogu talagalay kuwa aan jeclayn farshaxanka ciddiyaha
[ad_1] Dahaarka midabka hoose ayaa daalay, laakiin diyaar uma tihid inaad ku sawirto Sistine Chapel ciddiyahaaga-miyaa la yaqaan? BeautyHack waxay soo aruurisay ikhtiyaarrada farshaxanka ciddiyaha kuwa jecel minimalism waxayna u sheegeen saloonyada Moscow ee lagu celin karo. Kaliya tus sayidka! Xagee lagu sameeyaa: Inhype salon salon? Continue reading 30 ikhtiyaar oo manicure ah oo loogu talagalay kuwa aan jeclayn farshaxanka ciddiyaha
Timaha xardha: faaiido iyo qasaaro
[ad_1] EI waqtigaaga qaabaynta maalinlaha ah ma qaadataa? Ka dhig mid waara oo timaha lagu xardho. Nidaamku wuxuu hagaajiyaa mugga iyo curlsyada iyadoo la adeegsanayo halabuur gaar ah, naqshadeeye ama curlers. Oggolaanshuhu wuxuu socon doonaa saddex ilaa siddeed toddobaad! BeautyHack - oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo khasaaraha timaha xardha. Waa maxay timaha xardhan? Carving waa abuurista… Continue reading Timaha xardha: faaiido iyo qasaaro
Sida ugu dhakhsaha badan looga takhaluso hargab dibnaha: wuxuu kula taliyaa dhakhtarka maqaarka
[ad_1] HLet ku biloow wararka niyad -jabka leh: kaliya 4% dadka adduunka ayaan qaadin fayraska herpes. Oo suurtogalnimada inaad tahay ka -reebitaan, ee aan ahayn qaanuunka, waa mid la dayaco. Marka, su'aasha ah in laga takhaluso hargab dibnaha ayaa noqon kara mid ku habboon waqti kasta. Viktoria Britko oo ah dhakhtar ku takhasusay maqaarka maqaarka ayaa sheegtay sida… Continue reading Sida ugu dhakhsaha badan looga takhaluso hargab dibnaha: wuxuu kula taliyaa dhakhtarka maqaarka
waxay u egtahay iyo meesha lagu celinayo Moscow
[ad_1] Daabacadaha caleenta, midabyo dhalaalaya ayaa si ula kac ah loo isticmaalay, oo lagu xoqayaa oo qaawan yahay qaawan oo leh waxyaabo garaaf leh - manicurists at bandhigyada moodada ayaa loo adeegsaday dhammaan dariiqyada lagu soo jiidan karo ciddiyaha moodooyinka. Waxaas oo dhan hadda waa lagu soo celin karaa meelaha lagu qurxiyo Moscow - fikradaha iyo cinwaannada waxtarka leh ee ku jira maaddada BeautyHack! Midabada casaanka ah ee… Continue reading waxay u egtahay iyo meesha lagu celinayo Moscow
5 weji alaab ayaan gabi ahaanba isticmaalay
[ad_1] Tifaftiraha RBeautyHack Yulia Kozoliy - oo ku saabsan kiriimyada, maaskaro iyo emulsions wajiga si fiican ugu habboon oo, ugu yaraan, u qalma dareenkaaga. Kareemka qoyan Botanical Kinetics Hydrating Soft Crème, Aveda Naftayda uma arko mid ka mid ah taageerayaasha ugu daacadsan Aveda - ma aha dhammaan badeecadaha aniga igu habboon, iyo… Continue reading 5 weji alaab ayaan gabi ahaanba isticmaalay
dhammaan ku saabsan qalliinka caagga ah ee Kuuriya
[ad_1] Dhakhaatiirta qalliinka caagga ah ee TOO waxaa loo tixgeliyaa kuwa ugu khibradda badan adduunka. Sida laga soo xigtay tirakoob, haweeney kasta oo shanaad oo Aasiya ah ayaa ugu yaraan hal qalliin la isku qurxiyo. Isagoo ku dhejinaya bilicsanaanta khadadka kulanka, khabiirada Kuuriya ayaa dhammaystiray xirfaddooda, iyagoo kor u qaadaya dhaqdhaqaaq kasta. Illaa iyo hadda, Kuuriya waxay samaysay hawlgalkii ugu badnaa adduunka. Dalxiiska caafimaadka… Continue reading dhammaan ku saabsan qalliinka caagga ah ee Kuuriya
Sida loo go'aamiyo nooca midabkaaga oo ay lagama maarmaan tahay?
[ad_1] Farshaxamiistaha iyo farshaxan-sameeyaha-ku saabsan qiimaha uu hadda leeyahay nooca midabka iyo sababta ay tahay inaadan gebi ahaanba ugu tiirsanayn astaantan markaad dooranayso waxyaabaha la isku qurxiyo ama aad rabto inaad beddesho midabka timahaaga. Farshaxanka qurxinta Christina Novikova, abuuraha dugsiga qurxinta ee Novikova Studio Hadda kala -qaybsanaanta muuqaalka iyadoo loo eegayo noocyada midabka ayaa u muuqata… Continue reading Sida loo go'aamiyo nooca midabkaaga oo ay lagama maarmaan tahay?
Maxay baloogyadu ka hadlayaan: Nastya Swan
[ad_1] Mdress iyo blogger -ka Nastya Swan - oo ku saabsan caadooyinka maalinlaha ah ee quruxda, wada noolaanshaha gudaha naftiisa, nafaqada iyo isboortiga. Ku saabsan caafimaadka maskaxda Si aad u noqoto mid wax soo saar leh, aad bay muhiim u tahay inaad ilaaliso dheelitirka, dheelitirka gudaha oo aad fikradahaaga u habeysnaato. Dhaqannada ruuxiga ah, la shaqee cilmi -nafsiga iyo xiriirinta naftayda gudaha ayaa iga caawisa… Continue reading Maxay baloogyadu ka hadlayaan: Nastya Swan
Soo -bandhigayaasha TV -ga ugu quruxda badan 11 sano gudahood
[ad_1] Othey wuxuu si fudud u dhisi karaa xirfado moodelisnimo oo aan ka sii darnayn tii Cindy Crawford, laakiin waxay doorbideen istuudiyaha telefishinka inay maraan waddada. Ekaterina Andreeva, Mona Abu Hamze iyo 9 kale oo TV -yo aad u qurux badan 20kii sano ee la soo dhaafay. Ekaterina Andreeva Markay eegto Catherine, waxay umuuqataa in kiniinkii gabowgu wali ahaa… Continue reading Soo -bandhigayaasha TV -ga ugu quruxda badan 11 sano gudahood
10 bandhigyada TV -ga Brazil ee ugu wanaagsan carruurnimadaada
[ad_1] V Sannadkii 1988, taxanaha TV -ga reer Brazil ee ugu horreeyay “Addoon Izaura” ayaa lagu soo bandhigay USSR. Sheekada jaceylka ee Izaura dos Santos iyo Leoncio Almeida waxaa raacay waddanka oo dhan. Horaantii 80meeyadii, Susana Vieira, Vera Fischer, Antonio Fagundes iyo jilaayaal kale oo caan ah ayaa noqday “xubno” ku dhowaad dhammaan qoysaska… Continue reading 10 bandhigyada TV -ga Brazil ee ugu wanaagsan carruurnimadaada
5 badeecadood oo loogu talagalay cod aan iin lahayn iyo isbarbardhigyadooda
[ad_1] RAnastasia Speranskaya, oo ah tifaftiraha sare ee BeautyHack, ayaa tijaabiyey horudhac jilicsan, aasaas leh saamayn dhalaalaysa, iftiimin la mid ah dahabka dareeraha ah, iyo alaabo kale oo maqaarka kaamil ah miisaaniyad kasta. Aasaaska Primer ee qurxinta Touche Éclat Blur Primer, Yves Saint Laurent Xusuusnow saamaynta siman ee barnaamijka tafatirka sawir ee caanka ah? Iyada oo la adeegsanaayo hordhacaan… Continue reading 5 badeecadood oo loogu talagalay cod aan iin lahayn iyo isbarbardhigyadooda
udugga ugu fiican qaabka cabbirka safarka
[ad_1] Arum, oo lagu dhisay farqi aad u weyn oo u dhexeeya nacnaca suufka iyo patchouli, amber fudud laakiin wax ku ool ah oo leh dhaldhalaalka spruce viscous iyo dhibic casiir liin ah iyo udugyo kale oo ku habboon inay ku qaataan fasaxa - fiiri xulashada cusub ee dhaleeceynta cadarka Ksenia Golovanova. Eau de parfum Bergamote &… Continue reading udugga ugu fiican qaabka cabbirka safarka
9 waji waji aan caadi ahayn
[ad_1] Dib -u -hagaajiyeyaasha BeautyHack waxay maalintii ku qaadatay xirashada maaskaro wajiga ugu qosolka badan, oo aan caadi ahayn. Waxaan ka sheegnaa dareennadayada - yaa u baahan iyo sababta? Maaskaro xumbo laba qaybood ah oo nadiifinta iyo nafaqaynta maqaarka Double Dare, OMG! Maaskarada Kuuriya Double Dare OMG! Dadka wax ku qora waxay jecel yihiin - baakadaha cajiibka ah ee ay la socoto marwada “sumadda leh”… Continue reading 9 waji waji aan caadi ahayn
Udugga 15 qof walba ku riyoodo
[ad_1] L Udugyada udugga leh iyo waxyaalaha cusub ee udugga xulashada, kaas oo guga ubaxu ku soo baxo nafta, ayaa ku jira ururinta gaarka ah ee BeautyHack. Eau de parfum Rose Oud, Korloff Paris Faransiisku wuxuu leeyahay: “Siinta Korloff waa inaad qirtaa jacaylkaaga.” Muhiimna ma aha waxa loola jeedo, gabal dahab ah oo leh kala firdhin… Continue reading Udugga 15 qof walba ku riyoodo
Waan hadlaynaa oo tusi karnaa: 15 waxyaabood oo qurux badan bishii Abriil
[ad_1] Waan hadleynaa oo tusi karnaa: 15 sheekooyinka quruxda Abriil [ad_2]
xiddigaha ahaa “burcadka” carruurnimada
[ad_1] V carruurnimadii, kuwan caanka ah ee “pyshechki” ayaa kiciyay kalgacal ay ka mid yihiin kuwa kale: oh, dhabannadaas cawlan. Markii ay bislaadeen, waxay go'aansadeen inay tahay waqtigii laga takhalusi lahaa "laalaabka" oo loo rogi lahaa qurux qurux badan. Dadka caanka ah ee caruurnimadooda ku murugsanaa - ee ku jira ururinta BeautyHack. Jennifer Goodwin Dhagaystayaashu waxay jeclaadeen cutie -ka… Continue reading xiddigaha ahaa “burcadka” carruurnimada
15 dumarka ugu quruxda badan siyaasadda
[ad_1] Laga soo bilaabo marwada koowaad ee ugu caansan Bariga Dhexe ilaa ku xigeenka dumarka ugu quruxda badan Brazil. Maqaalka BeautyHack - Boqoradda Rania, Ivanka, Melania Trump iyo 12 marwo oo kale oo gabi ahaanba wax walba sameeya. Melania trump Iyadoon ogayn, Melania waxay shaqadeeda siyaasadeed bilowday 2005, markay guursatay Donald Trump. A… Continue reading 15 dumarka ugu quruxda badan siyaasadda
Sidee si sax ah loo marsadaa cadarka?
[ad_1] Raad-raaca wanaagsan ee NSA kama tagi doono dadka kale danayn la'aan, wuxuuna ku siin doonaa isku kalsooni. Marka la isticmaalayo eau de toilette, waa in la xusuusnaado in dhawaqa iyo muddada udugga ay dhinacyo badan isku hayaan. Midda ugu weyni waa sida saxda ah ee cadarka loogu isticmaalo qaybaha jirka iyo dharka. BeautyHack wuxuu ku saabsan yahay sida… Continue reading Sidee si sax ah loo marsadaa cadarka?
5 shey oo qurxiyo oo aad khalad u isticmaalayso
[ad_1] TOSenia Wagner ayaa imtixaan ka qaadeysa caqliga quruxda: arday aad u fiican - shan, arday dhicis ah - dib u qaadasho! 1) BB cream Adiga: ku dheji saldhigga sida cod. Dhab ahaantii, tani dembi ma aha - oo laguma ciqaabi doono sida Raskolnikov. Hal shardi: haddii saldhiggu yahay mid joogto ah… Continue reading 5 shey oo qurxiyo oo aad khalad u isticmaalayso
sababaha aadan ogeyn
[ad_1] Xasaasiyadaha, kiimikooyinka guriga iyo sababaha kale ee lama filaanka ah ee ay ciddiyaha uga soo baxaan. Fiitamiin la'aan La'aanta Sababaha ciddiyaha kala go'a waxay noqon karaan kuwo gudaha iyo dibaddaba ah. Geedka timirta waxaa iska leh yaraanta fiitamiinnada iyo maaddooyinka yaryar: kalsiyum, fiitamiin D, fosfooraska, silikoon, birta. Maqnaanshahooda, ma aha oo kaliya ciddiyaha, laakiin sidoo kale timaha iyo maqaarka. In… Continue reading sababaha aadan ogeyn
Peppermint saliid lagama maarmaan u ah timaha quruxda badan: run ahaantii ma shaqeysaa?
[ad_1] TOolumnist BeautyHack, aasaasaha astaanta isku qurxinta dabiiciga ah (@ natureal.ua) Vita Liasota ayaa u sheegtay sababta saliidda lagama maarmaanka ah ee peppermint loogu daro waxyaalaha la isku qurxiyo timaha iyo haddii ay dhab ahaantii gacan ka geysaneyso korinta dhexda dhexda. “Soo saarista waxyaabaha la isku qurxiyo, waxaan badanaaba isticmaalnaa saliidda lagama maarmaanka ah ee peppermint - xitaa waxaan ku yeelannay xoqid ku saleysan. Waxay… Continue reading Peppermint saliid lagama maarmaan u ah timaha quruxda badan: run ahaantii ma shaqeysaa?
5ta filim ee jaceylka ee ugu sareeya 2019
[ad_1] NSA Kadib maalin daal badan oo shaqada ah, ma rabtaa inaad ku nasato melodrama ama inaad tuurto shucuurtaada adoo daawanaya filim jacayl ku saabsan? Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad barato xulashadayada, oo ay ku jiraan sheekooyinka ugu wanaagsan ee 2019. Bilow bilowga Filimku wuxuu jilaa Jennifer Lopez oo soo jiidasho leh (akhri… Continue reading 5ta filim ee jaceylka ee ugu sareeya 2019
18 timo qurxoon oo timo dheer leh
[ad_1] Ujeeddooyinka VVictorian, walxaha Gothic iyo xorriyadda buuxda ee xulashada aaladaha! Xirmooyin isku dhafan Waa jaceylkan waxyar ka soo jeeda Fiktooriya ee ugu fudud in lagu turjumo timo dhaadheer. Haddii aad haysato qalab aad u ballaaran oo aadan ku socon waddada xeerka lebiska ama doorbidyada shaqsiyeed awgeed, waxaad ku xaddidi kartaa naftaada muuqaalka ama guutooyinka laastikada… Continue reading 18 timo qurxoon oo timo dheer leh
Kibir ku shaqeeya by WordPress.